Date My Pet » Anogona vanobudirira Women Zvechokwadi izvozvo All?
kubudikidza Jennifer Brown Banks
Anogona vanobudirira Women Zvechokwadi izvozvo All?
Last updated: Sep. 24 2020 | 2 Maminitsi verenga
…Kana tiri "overachievers" yanhasi kukanganisa ukama hwavo?
"Mauya refu nzira, mwana,"Inodaro imwe yakakurumbira hwezvokutengeserana vachiombera dzidziso mukadzi ano. Uye zvirokwazvo isu tasvika!
Vakadzi mutorwa kubva pazuva uye zera kana isu vasingagoni kunyange kukanda mavhoti, enyika powerhouses kuti vaverengwe pamwechete.
Kunyange chepamusoro munhandare, vazhinji vedu zvakwira yemakambani Manera poutungamiriri mabasa, achitarisira muhombe dhipatimendi zvemari uye pasi kuti kazhinji vanhu.
Wedzera ichi chokuti isu kazhinji dzimba dzedu pachedu, kuwana mari yedu pachedu, uye uine pfungwa dzedu. Uye mumashoko boka nokuimba, Destiny kuti Child, "Ini vanovimba neni, kana ndinoda naro. "
Bravo divas! Tora uta.
asi, pano Ndiyo kutengeserana kure…
mukadzi akabudirira Today ringava kuhwinha mubhizimisi apo kurasikirwa murudo.
Uye pano chikonzero.
Kure zvakawanda vedu vanotadza kuziva kuti vakawanda unhu anotigonesa kuti kudzora boardroom, zvinogona kukonzera pakukuvadza mumba mokuvata. Mhoro?!
In hondo pavo, Tiri mukuwana hondo asi kurasikirwa hondo?
kana, mumashoko Dr. Phil, "Sei izvozvo workin’ nokuti Ya '?"
Heano ina nevakawanda dzinouraya kuti dzinoratidza sei isu dzimwe nguva emasculate varume vedu pasina ndazviziva.
Zvichida uri mhosva vashoma. Verenga uye uzive.
THE "ZVIRI MUNZIRA WANGU KANA THE HIGHWAY" mafungiro— chokwadi, nevanotungamirira pabasa nyika achititadzisa zvitungamirire zvido zvedu vaya vatinosangana kuzoripa uye kubhadhara mabasa avo. asi, ukama zvakasiyana. Vari kuva kudyidzana apo vaviri’ inoda nemanzwiro dzaigarwa, kwete soMupi mubereki kana kununura.
nhaka Kuzvifunga—Mwari ropafadzai mwana ane rake. Vamwe vedu hazvimbokundikani kuti vatakaroorana navo vazive kuti zvinhu zvedu ndiwo byproducts kubudirira kwedu uye nhengo chete nesu, kunyanya pakupisa nharo. "Imba yangu, motokari yangu, mari yangu. "Shoko rangu!
"NDINI MUKADZI kundinzwa vanoomba "Syndrome—Kubva kuva mano mari yedu pachedu uye kuriritira kwedu zvakanaka hwakanaka, kuti wembereko uye wokugamuchirwa kuita izvo X anogona varume kubva zuva mukana wokuti vanhu vanga upenyu, vamwe vedu vari zvichipa shoko kuti vanhu dispensable nemashoko edu nezviito.
KUTORA BIG inomirira ON DUKU ISSUES—Achirwa hondo nemashoko anopa vamwe vakadzi kunzwa simba uye kukosha, apo vachisiya varume vanopandukira uye nemishonga shanduko.
Strong hakuna kuipa nguva dzose.
Asi Nechiyero chinonyengedzera kazhinji zviri nani.
Vanogona vakadzi nazvo zvose?
chokwadi, asi mumwe wacho gotta’ kubhadhara Tab— izvo zvinoda zvishoma anopa tora imwecheteyo tambokurukura unyanzvi nehanzvadzi savvy anoshandisa kubva 9 kuti 5. Shure kwezvose, sezvo Billy Dee William anoudza Diana Ross ari bhaisikopo Mahogany, "Kubudirira pasina munhu kudzigovera zvinoreva nothin '!"
5 Zvikonzero Sei Pet Madzishe Vari vakundi In The Dating World
4 Zvikonzero A Profile Photo Kuchaita Search Your For Love
Online Dating Conversation Topics nokuda 100% budiriro
Kutaura Dirty muukama